မြန်မာနှင့် ချက် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တိုင်သစ်အဖြစ် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် နှင့် ချက်ကုန်သည်များအသင်းတို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုး | UMFCCI
မြန်မာနှင့် ချက် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တိုင်သစ်အဖြစ် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် နှင့် ချက်ကုန်သည်များအသင်းတို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုး
Written by UMFCCI Administrator // February 28, 2016 // UMFCCI News // No comments
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တိုင်သစ်အဖြစ် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ချက်ကုန်သည်များအသင်း (Czech Chamber of Commerce) တို့၏ နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးပွဲနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Chatrium ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနားကို ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Lubomír Zaorálek တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Jaroslav DOLEČEK နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်၊ ဒုတိယ ဥက္ကဌများဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးနှင့် ဦးမြဟန်၊ Nikkei Asian Review မှ အယ်ဒီတာချုပ် Ms. Gwen Robinson နှင့် ချက်-မြန်မာနှစ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဦးရေ (၅၀) ဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Lubomír Zaorálek အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်တွေ့ဆုံမှုတွင် ယခုအကြိမ်သည် ဦးရေအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် နှစ်ဖက် အပြန်အလှန်နားလည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး စီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖော်ဆောင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ကြုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေတ်သစ်ကာလတွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအား နှစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှလည်း ကူညီပံ့ပိုးရန် အသင့်ရှိပါကြောင်း တင်ပြပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်အရ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့် ချက်ကုန်သည်များအသင်းတို့အကြား နှစ်ဖက်နိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို အသင်းချုပ် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးနှင့် ချက်ကုန်သည်များအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Borivoj Minar တို့က ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက်တွင် ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို “Debating Business Opportunities and Myanmar’s Economy” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျင်းပရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ အသင်းချုပ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်၊ ချက်ကုန်သည်များအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ Mr. Borivoj Minar, Nikkei Asian Review မှ အယ်ဒီတာချုပ် Ms. Gwen Robinson နှင့် Deloitte မှ Country Managing Partner ဦးစိုးဝင်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ အခွင့်အလမ်းများနှင့် စ်ိန်ခေါ်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှစ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်နေ့လည်စာစားခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ လာရောက်တွေ့ဆုံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် စက်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနည်းပညာ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် အစရှိသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများပါဝင်ကြောင်းသိရှိရသည်။